Par Taratra sur 05/11/2019
Mahazo vahana hatrany ny kolikoly maneran-tany, araka ny tatitra nataon’ny Global Risk Profile (GRP), ny faran’ny volana oktobra teo. 199 ireo firenena nalahatry ny GRP amin’izao fanadihadiana fanindroany navoakany izao. « Miharatsy ny vokatra hita », hoy i Marina Klokova, tompon’andraikitra amin’ny fandraharahana ao amin’ny GRP. Isa 100 ny ambony indrindra amin’ny fandrefesana ho an’ny firenena iray, ka raha ampitahana ny taona 2018 sy 2019, nihoatra ny isa 50 ny 100 mahery amin’ireo firenena 199 ireo. Tsara toerana tamin’ity 2019 ity i Suisse, laharana fahefatra, raha ny filaharana navoakan’ny GRP. Tsy nahitana kolikoly avo lenta any amin’io firenena io.
Mifanaraka miara-dia izao ny Peugeot PSA, Frantsay, sy ny Fiat –Chrysler, Italianina, samy orinasa mpamokatra fiarakodia. Samy mitana 50 % amin’ny vola miasa avy ireo orinasa roa ireo. 10 ny mpikambana ao amin’ny filankevi-pitantanana, ka dimy avy amin’ny PSA, ary dimy avy amin’ny Fiat-Chrysler. I Carlos Tavares, Frantsay no tale jeneraly vaovao amin’izao fiombonan’ny roa tonta izao. Miisa 8,7 tapitrisa ny fiarakoadia ho lafon’izy ireo, hampiditra azy ireo anisan’ny goavana indrindra amina fanamboarana fiarakodia, laharana fahefatra maneran-tany.
Na betsaka aza ny komandy, voatery nampihena ny fiaramanidina Airbus vokariny ny Eoropeanina. Sarotra ny ilaina sy takina amin’ny fanamboarana izany fiaramanidina izany ka voatery nahena ny namidin’izy ireo tamin’ity 2019 ity. Manodidina teo amin’ny fiaramanidina 860 teo navoakan’ny Airbus, nefa nisy 880 na 890 ny komandy tonga tany aminy. Ny komandy voaray rehetra hatramin’izao mahatratra 7133 fiaramanidina. Sarotra indrindra ny fanamboarana A321 ACF, araka ny famaritan-dry zareo Eoropeanina azy.